Fanokafana Taom-piasana 21 – FJKM
FANOKAFANA NY TAOM-PIASANA SY
FITONDRANA AM-BAVAKA NY FILOHAN’NY FJKM
Toy ny fanao isa-taona dia nifamotoana teny amin’ny COLISEUM ANTSONJOMBE ny vahoaka kristiana FJKM ny Alahady 17 Janoary 2021 , ho fitondrana am-bavaka ny Filohan’ny FJKM sy ny ankohonany sy ho fitondrana am-bavaka ny Taom-piasana vaovao 2021 . Noho ny hamehana ara-pahasalamana mbola iainan’izao tontolo izao sy Madagasikara dia niditra indroa ny fotoana : 7 ora 30 sy ny 11 ora.
Nitarika sy nitoriteny : Andriamatoa ANDRIAMAMPIANINA Zaka ,Mpanolotsaina BMF ny Andriamatoa ZARAZAKA Jean Louis , Filoha Mpanampy Mpitandrina BMF . Nilaza ny raharaha : ny Sekretera Jeneraly RADIMISAON Jonah , Mpitandrina . Nizara ny Soratra masina ho an’ny ankizy , ny Mpitandrina RAKOTOARISOA Kaleba ( Filoha Sekoly Alahady )sy ANDRIAMAMPIANINA Zo Nantenaina (Birao Sek Al). Vavaka mialohan’ny vakiteny , Andriamatoa RAKOTOMANDIMBY Benjamin. Namaky ny Teny : Andriamatoa RAKOTONDRAINY Jaona (TDF) , Ramatoa RAKOTONDRANAIVO Domoina (Tonia Sekoly) sy Ramatoa ANDRY NIRINA Velosoa (Tonia Mpiasa sy Vola) . Nanafana ny fotoana ,ny Antoko mpihira STK mitambatra . Nitarika ny vavaka fangatahana Andriamatoa ANDRIANARIVELO Olivier (Mpitahirivola BMF) . Nanao ny teny fiarahabana ny Filoha , Andriamatoa RANDRIAMAMONJISOA Georges (Filoha Mpanampy Laika BMF ).
Izany no lohahevitra noraisin’ny FJKM mandritra ny volana Janoary 2021 sady nanankinana koa ny fotoana manontolo . Ny EZEKIELA 36.33-38 no nandraisana ny Toriteny tamin’ny fidirana II , izay nalahatry ny Mpitandrina ANDRIAMAMPIANINA Zaka .
Miteny tamin’ny vanim-potoanan’ny fahababoana sy taorian’izany ny Soratra Masina eto ary mampanantena ho avy tsara . Nirongatra ny faharatsiana tamin’izany fotoana izany , indrindra ny fanompoan-tsampy . Natao sorona ny zanaka , naripaka ny mpaminany sy ny mpivavaka amin’i Jehovah . Nanjaka ny tsy rariny, teraka ny mosary . Tao anatin’izany no nitenenan’i Jehovah fa hanome fo vaovao sy fanahy vaovao Izy (Eze 36.26). Ny hoe : fo dia manakaiky ny saina , dia ilay saina avy amin’Andriamanitra, afaka hanova ny tany toy ny saha Edena . Tsy maintsy miova aloha ny olombelona vao afaka hiova ny tontolo iainana . And 34 : « asaina ny tany efa lao ».Mila miverina amin’ny tany isika Malagasy raha araka ity hafatra ity . Raha tsy hiresaka afa-tsy ny olana any Atsimo , dia zava-dehibe ny fananganana vovo. Mitady ny vaha-olana maharitra , mahasoa ny mpiara-belona . Ampiasao ny tany mba hamokarana . Mila mihetsika isika eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina . Raha akapoka dia tena azo resena tsara ny fahantrana , miankina amin’ny fanekentsika hiova izany .
FIARAHABANA RAY AMANDRENY
Andriamatoa RANDRIAMAMONJISOA Georges , Filoha Mpanampy BMF no nisolo tena ny vahoaka FJKM niarahaba an’Andriamatoa IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi , Filohan’ny FJKM sy Ramatoa RATSIMANDRESY Estera , Mpitandrina ary ny zanaka aman-jafiny rehetra . Teny firariantsoa narahana tonom-bavaka mafana no natolotra azy ireo , niaraka tamin’ny Rakitra voalohany natolotry ny kristiana .Tononkalo fankaherezana kosa no nanamafisan’i SARAHA AMMI , zanaky ny Filohan’ny FJKM ny fiarahabana azy ireo .
TENIN’ANDRIAMATOA FILOHAN’NY FJKM
Natombony tamin’ny vavaka ny teniny vao nitodika tamin’ny vahoaka nanatrika izy . Fisaorana no votoatin’ny fandraisam-pitenenana an’ireo solotenam-panjakana sy ny Fiangonana rahavavy mpiombona ao amin’ny FFKM sy FLM nandefa solotena nanome voninahitra ny fotoana . Nisaorany tokoa ny fahamaroana sy ny fahatongavan’ny mpino marobe . Ny Tsodrano nafafiny ho an’ny rehetra dia ny ISAIA 45.2a manao hoe : « handroso eo alohanao Aho ». Tsy ho diso làlana isika amin’ity taona ity sady azo antoka fa hitondra antsika amin’ny tanjona ny Tompo . Telo mazava tsara ny Hafatra :
1-Mahereza tsara : Aoka ho marina ny fibebahanao . Mahereza mazoto miangona , mahereza amin’ny fanefana ny adidy . Tsy maharesy ny herin’ny fahasoavan’Andriamanitra ny fahantrana . Aoka tsy hifanakivy.Mahereza mivavaka . Isak’alahady , aoka hisy tonom-bavaka ho an’ny Synoda Lehibe izay hatao any Sambava amin’ity taona 2021.
2-Miasà tsara : Mbola misy asa tsy vitantsika tamin’iny taona lasa iny izay hotohizana amin’ity taona ity dia ny famitana ny trano lehibe, fanofanana Mpampianatra any IMERIMANDROSO Ambatondrazaka , tsangambato faha-200Taona Sekoly FJKM. Aza menatra ny sekolinao .
TPM IVATO : Vita ny trano lehibe , izay isaorana manokana ny Fianakaviana RAVALOMANANA Marc , nandray anjara betsaka tamin’izany niaraka tamintsika fiangonana .Mbola mila fanaka izany trano lehibe izany (seza, latabatry ny mpampianatra sy mpianatra ), lakozia sy fidiovana (WC) . Hisy ny Compte manokana azontsika handrotsahana ny anjara birikintsika . Anontanio an’ity laharana ity ny numero de compte : 033 11 210 53 . Ny Fiangonana no vavolombelon’ny fahamarinana amin’ny fitantanana.
Momba ny KERE any Atsimo : anatin’ny SP Ambovombe Kristy Ranovelona . Misy karazany telo ny ilaina maika :
Vonjy aina : Fizarana sakafo ho an’ireo efa tena reraka
Fizarana masomboly (voanjobory sy katsaka ) mba hafafy raha vao milatsaka ny orana .Voanjobory (1400ar/Kap) , katsaka (2000ar/kap)
Fitaovana fiara 4X4 , entina mitety ireo faritra hizarana ny fanomezana , mijanona any an-toerana mandritra ny enim-bolana ny fiara . Tokony hanao vovo koa ny fiangonana miaraka amin’ny SampanAsa momba ny Fampandrosoana (SAF).Misanda eo amin’ny 60 Millions de FMG , ary ny siniben-drano 25 000 FMG ny iray . Ny Président Synodal SOJA ARTHUR no niandraikitra ny fitantanana ny fanampiana miaraka amin’ny mpiara-miasa aminy .Nambaran’ny Filoha ny maha- olon’ny fahamarinana azy , olon’ny finoana , olon’ny asa , mahatoky .Marihana fa ny fanomezana rehetra natao ho an’Andriamatoa Filohan’ny FJKM tamin’ny fidirana I sy II tamin’io fotoan-dehibe io dia natolony manontolo ho an’ireo havana tratry ny mosary any atsimo .
Tamin’ny filaminana no nivoahana ny Coliseum Antsonjombe na dia vahoaka be tokoa aza no tafavory tao.Tomombana tsy misy nokianina ny fanamafisam-peo. Kanto ny fampiaraham-peon’ny mpihira voafantina sy ny vondron’ny mpitendry zava-maneno . Nirindra ny asa niantsorohan’ny SAMPATI /FJKM tamin’ny fandaminana ny olona sy ny fiara teo amin’ny Parking . Ara-dalàna ny trano fivoahana sy fidiovana . Velom-bolo ny vahoaka nody tamin-kery sy fahavononana hiatrika ny fiainana . Ny andro rahateo tsara , nibaliaka na dia ao anatin’ny fahavaratra aza . Avy amin’Andriamanitra avokoa izany ka mahagaga eo imasontsika .
(AFIFAB /SITE WEB )